‘फाटेको जुत्ता’ पहिलो पोस्टर रिलिज, फाटेको जुत्ता लगाउने को हुन् ? « Ramailo छ
‘फाटेको जुत्ता’ पहिलो पोस्टर रिलिज, फाटेको जुत्ता लगाउने को हुन् ?
कात्तिक १७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ को पहिलो पोस्टर रिलिज भएको छ । सार्वजनिक पोस्टरमा धोती लगाएका एक व्यक्ति फाटेको जुत्ता लगाएर उभिएका छन् । उनको कम्मर मुनिको भाग मात्रै देखाइएको छ, छेउमा बोरा राखिएको छ । छेउछाउमा वियरका बोत्तल पनि ढलेका छन् । को हुन् त धोती लगाएर फाटेको जुत्ता लगाउने यी व्यक्ति ?
सम्भवतः निर्माण पक्षले यही कौतुहलता जगाउन यस प्रकारको पोस्टर रिलिज गरेको हुनुपर्दछ । निकेश खड्काको निर्देशन रहेको फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ सौगात मल्ल, प्रियंका कार्की, कामेश्वर चौरसिया लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । अर्जुन कुमारको निर्माण रहेको फिल्म डार्क कमेडी जनराको हो ।